​Åmål waxuu ku taala Dalsland halkaasi uu Vänern uu tagaayo ilaa ku dhawaad bartamaha magaalada, dadka-gäst waxeey uu dhawdahay goobta suuqa. 48 degmo iyo Åmål waxeey isku noqonayaan gobolka Västra Götaland. Åmål waxeey ku taala qeeybta waqooyiga ee dalka, waxeeyna xadka halkaas uga saaran tahay Värmland. Degmada Åmål waxaa la sameeyay 1 janaayo 1971 ayadoo ka soo baxday isku taga magaalada Åmål iyo degmada Tössbo. Åmål waxeey magaalo noqotay isla 1643:dii markii boqorada Kristina 1 abriil saxiixday waraaqda dheefka. Xaafadaha kale ee degmada waa markii la weeyninki laga bilaabo Fengersfors, Tösse-Tydje, Fröskog, Ånimskog, Mo och Edsleskog.
Liis ee ku qoran yihiin shirkadaha guriyaasha iyo dalaalka waxaad ka heleeysaa bogga degmada.
Åmål waxaad ka heleeysaa ururka krishtanka ee Åmål, waxaana in dheeraad ah ka akhrisan kartaa bogga kaniisada. Warbixin dheeraad ah oo ku saabsan ururada firfircoon dhamaantood bogga degmada Åmål.
Casharo luuqadeed oo loogu tala galay dadka dalka ku cusub, biibito-luuqadeed.
Biibito leh ciyaarta Bingo, biibito hees, biibito luuqadeed, koox wadajirka degaanka, kor uu akhris, biibito dumareed.
Goob-kulan, safar hawa qaadasho, hoowlo booqasho, wargeeys arkhin loogu tala galay ardayda-sfi, talobixinta dadka dalka ku cusub (xarirka hey’addaha dowladeed).
Babycafe, xarun furan, iswiidhishka-maalmeedka, koox waalid.
Bartamaha magaalada ee Åmål waxaad ka heleeysaa dukaamo-cunto, dukaamo dhar, maqaayado iyo biibitoyaal. In dheeraad ah oo ku saabsan dukaamada Åmål waxaad ka akhrisan kartaa bogga degmada.
Waxbarashada dadka waa weeyn ee degmada Åmål oo lagu qabto isla goobta dugsi sare ee degmada waxeey soo bandhigeeysaa tageerada diwaangalinta iyo jiheeynta doorashada waxbarashada. Isla goobta ayaa lagu soo bandhiga waxbarashada ee iswiidhishka loogu tala galay ajnabiga. Waxbarashada dadka waa weeyn waxaa lagu soo bandhigaa oo kale ”Högskola på hemmaplan” halkaasi oo aad ku dhigan karta waxbarasho sareeyso oo masaafadeed.
Degmada Åmål waxaan isticmaalnaa gobolka adeegiisa turjumaaneed
In dheeraad ah ka akhriso isgaarsiinta ka socoto iyo mida ku socoto Åmål bogga degmada.
Junior mjukvaruutvecklare sökes till Åmål Mjukvaruutvecklare
Projektledare Test till Azelio Civilingenjör, kontroll, elkraft
Åmål: Underhållstekniker Underhållsmekaniker
Projektledare 75 % Informationskonsult
Lärare i svenska som andraspråk 100 % SFI-lärare
Testtekniker till Azelio i Åmål Kontrollingenjör
Testingenjör till Azelio i Åmål Kontrollingenjör
Frisör sökes Åmål Frisör
Chaufför / ekonomibiträde Ekonomibiträde, storhushåll
Servicetekniker till Azelio i Åmål Serviceelektriker, installation
Studie - och yrkesvägledare till Resursenheten Studie- och yrkesvägledare
Vikarierande studiehandledare i arabiska till Karlbergsgymnasiet Studievägledare
Mjukvaruutvecklare till Azelio i Åmål Mjukvaruutvecklare
Elkonstruktör till Azelio i Åmål Civilingenjör, elkraft
Systemarkitekt för kontrollsystem till Azelio Systemarkitekt
Åmål: Redovisningsansvarig Redovisningsekonom
Avonova söker företagssköterska till Åmål / Mellerud Företagssjuksköterska/Företagssköterska
Bogga 1 ee ka mid ah 3
7 mil till Karlstad
38 mil till Stockholm
19 mil till Oslo
Bogga internetka degmada​